Izindaba - Izinzuzo zezempilo zepea protein powder
1. Kungakhuthaza ukusebenza kwezinso
Olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi ipea protein ingaba ngomunye wemithombo yamaprotheni ehamba phambili kubantu abanezinkinga zezinso.
Eqinisweni, ngokocwaningo, ipea protein ingasiza ukubambezela noma ukuvimbela ukulimala kwezinso kulabo abane-high blood pressure.
Kungasiza futhi abantu abanezifo zezinso ukuthi baphile isikhathi eside ngokuzinzisa amazinga omfutho wegazi futhi kungakhuphula ukusebenza komchamo ukusiza umzimba ukuthi uzikhiphe ubuthi futhi uchithe kahle.
2. Isiza ekwehliseni isisindo
Njengawo wonke ama-powders amahle wamaprotheni, i-pea protein ingaba ithuluzi eliwusizo ku-arsenal yakho yezikhali zokunciphisa umzimba.
Ikakhulu, uma ufuna ukunciphisa amakhilogremu ambalwa, ukungeza lokhu kuyinkimbinkimbi kokudla ekudleni kwakho kwansuku zonke kuzokusiza kakhulu wena nomzimba wakho.
Kuvamile kubantu abafuna izindlela ezisheshayo zokwehlisa isisindo ukukhohlwa ngokuphelele ngokudla kwamaprotheni, okungabambezeli ukwehla kwesisindo ngokuhamba kwesikhathi.
Kodwa-ke, ukuthola phakathi kuka-0.8-1.0 amagremu wamaprotheni ngekhilogremu ngalinye lesisindo somzimba ngosuku kukusiza ukwakha imisipha futhi ushise amanoni ngokushesha.
Uma unesisindo esingamakhilogremu angu-140, okungaba amakhilogremu angama-64, ngokwesibonelo, kufanele udle phakathi kwama-51 no-64 amagremu wamaprotheni ngosuku.
3. Usekela impilo yenhliziyo
Ipea protein ayilungele okhalweni lwakho kuphela, kodwa futhi isekela inhliziyo enempilo.
Ngo-2011, imodeli yezilwane ngaphandle kwaseCanada yabika ukuthi ipea protein yehlisa umfutho wegazi uma usezingeni eliphezulu kakhulu.
Ngokumangazayo, amagundane ocwaningweni akhombise ukwehla okukhulu kwe-systolic ne-diastolic blood pressure ngaphezu kwamasonto ayisishiyagalombili kuphela.
4. Khulisa ukushuba kwemisipha
Abantu abaningi banombono oyiphutha maqondana nalokho okuthiwa amaprotheni asuselwa emvelweni wezitshalo, njengoba abaningi becabanga ukuthi awazuzisi nakancane noma ukuthi awanawo umthelela ekukhuleni kwemisipha noma ekululameni, ikakhulukazi ngemuva kwendlela yokuziqeqesha, ngakho-ke, qinisekisa lokho kuphela amaprotheni we-whey ayilungele.
5. Ilinganisela amazinga kashukela egazini
Ushukela ophakeme wegazi ungathinta izici eziningi zempilo yakho futhi ungadala izimpawu ezahlukahlukene zesifo sikashukela, kufaka phakathi ukukhathala, ukoma okwandayo, ukuphulukiswa kwesilonda kancane, kanye nokwehlisa isisindo ngokungenhloso.
Olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi konke-amaprotheni angokwemvelo anezela njenge-pea protein angazuzisa uma kukhulunywa ngokugcina amazinga ajwayelekile kashukela egazini.
Ipea protein ibonakele ukuthi ithathwa njengesithako esizuzisayo futhi ingasiza ekuthuthukiseni ukulawulwa kwe-glycemic lapho kuhlanganiswa nokunye ukudla.
I-Pea Protein Usetshenziswa Kumuthi We-Ayurvedic
Muva nje, ipea protein ibe ngumthombo wamaprotheni odumile futhi olungele labo abafuna ukukhulisa ukudla kwabo futhi bahlangabezane nezidingo zabo zokudla okunempilo.
Nokho, uphizi sekuyisikhathi eside usetshenziswa njengomthombo wokondleka nokwelashwa ezinhlotsheni eziningi zemithi yesintu.
Emithini yendabuko yamaShayina, ngokwesibonelo, uphizi kucatshangwa ukuthi ukhuthaza ukukhiqizwa komchamo futhi unciphise ukugaya ukudla ngenkathi kusekela impilo yokugaya ukudla futhi kusekela ukujwayeleka.
Okwamanje, uphizi uvame ukunconywa ngokudla kwe-Ayurvedic ngoba kulula ukugaya futhi kungasiza ukwanelisa isisu futhi kugcine nesifiso sokudla.
Ngenxa yokuqukethwe kwe-fiber ephezulu, uphizi nawo akholelwa ukuthi asebenza njengama-laxatives ukuvimbela ukuqunjelwa nokwengeza inqwaba esitokisini.
Ungatholaphi ipea protein
IPea Protein Isolate manje isiyatholakala endaweni yokudla yezempilo yezitolo ezinkulu kakhulu zezitolo, izitolo zezidakamizwa, nezitolo ezenezelayo.
Ingathengwa futhi ngabathengisi abakwi-inthanethi, okungasiza kakhulu ekufundeni nasekuqhathaniseni ukubuyekezwa kwamaprotheni we-pea nokuthola umkhiqizo omuhle kakhulu kuwe.
Ubisi lwe-pea protein luyatholakala nasezitolo zokudla okukhethekile njengezindlela ezinomsoco ezisekelwe ezitshalweni zobisi lwenkomo oluqukethe namanani aphezulu we-calcium namaprotheni kunezinye izinhlobo zobisi ezingenalo ubisi.
Ipea protein igcwalisa izikhala kwesinye isikhathi ezitholakala kumaprotheni erayisi ansundu (njengamazinga aphansi e-lysine), kepha womabili angama-100% we-vegan futhi angakusiza ukuthi ugweme izinkinga zegesi ezingaba khona ezihambisana nezinye izinhlobo zamaphrotheni powders.
Ama-peas organic peas organic nawo asebenza kahle kuyo yonke into kusuka kuzimpahla ezibhakiwe kuya ekudleni okulula, ama-dessert, kanye nokudla kwasekuseni, okwenza kube lula ukukhuphula amaprotheni owadlayo nganoma yisiphi isikhathi sosuku.
Ipea protein isilinganiso
Ungathola amaphilisi we-pea supplements ngezindlela eziningi ezahlukahlukene. Ngenkathi abaningi bekhetha ukusebenzisa i-protein powder isolate, engangezwa kalula ekunyakaziseni nasekuphekeni okucebile kwamaprotheni, iprotheni le-pea lingangezwa kaningi kuma-protein bar nakwizithasiselo.
Ngokuvamile kunconywa ukuthi abantu abadala abaphilile bathole okungenani u-0.8-1.0 amagremu wamaprotheni ngekhilogremu lesisindo somzimba ngamunye. Leli nani lingahluka kakhulu ngokuya ngezinga lomsebenzi wakho, nabanye abasubathi abanamandla aphezulu abadinga kuze kube kabili iphrotheni
Abantu abadala asebekhulile kanye nabantu abanezimo ezithile zempilo njengomdlavuza, ukusha, noma ukulimala kanzima nabo bangadinga inani eliphakeme lamaprotheni.
Ngokuvamile, ukuphakelwa okujwayelekile kwepea protein powder kumayelana nesipuni esisodwa noma amagremu angama-33.
Kodwa-ke, futhi ungahlukanisa leyo mali ngesigamu bese uyihlanganisa nesigamu sokuphakwa kwenye iprotheni powder, njengeprotheyini lelayisi elinsundu, ukukhipha uhla olubanzi lwama-amino acid nezakhi zomzimba ezibalulekile.
Izingozi Zamaphrotheni, Izinyathelo Zokuqapha Nemiphumela Emibi
Amaphrotheni powder angaba yindlela elula futhi elula yokwandisa ukudla kwakho kwamaprotheni lapho uphelelwa isikhathi ngesikhathi noma udinga usizo oluncane lokuhlangabezana nezidingo zakho zansuku zonke.
Khumbula, noma kunjalo, ukuthi iprotheni powder akufanele ithathe indawo yokudla kwamaprotheni ngokuphelele emithonjeni yokudla.
Ukudla kwamaphrotheni njengenyama, inhlanzi, izinkukhu, amaqanda, nemidumba kunothe ngamaphrotheni, kodwa futhi kuqukethe inqwaba yezinye izakhamzimba ezibalulekile ezidinga umzimba wakho.
Ipea protein iphephile kubantu abaningi futhi ingadliwa ngengcuphe encane yemiphumela emibi. Kodwa-ke, ukusebenzisa amaprotheni ngamanani amakhulu kungadala imiphumela emibi eminingi yamaprotheni.
Ukweqisa ngokweqile ngamaphrotheni kungadala izinkinga ezinjengokuzuza kwesisindo, ukulahleka kwethambo, izinkinga zezinso, kanye nokusebenza kwesibindi okungakhubazekile.
Gcina ukuphuza kwakho ngokulinganisela ukuze uzuze izinzuzo eziyingqayizivele zeprotheni powder ngaphandle kokudlula ngokweqile noma ukulimaza impilo yakho.
Ikhukhi leLadyfinger, Izingane Amabhisikidi, Ukudla Amakinati Anosawoti, I-Hawthorn Strip, Amaphakethe Esoso Soy, Induku entsha ye-Bean Curd,